ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ခြိနျးတှတေဲ့အခါမြိုးမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ဘယျလိုပွငျဆငျမလဲ ? ? ? – SoShwe
Home/LifeStyle/ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ခြိနျးတှတေဲ့အခါမြိုးမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ဘယျလိုပွငျဆငျမလဲ ? ? ?
ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ခြိနျးတှတေဲ့အခါမြိုးမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ဘယျလိုပွငျဆငျမလဲ ? ? ?
admin February 26, 2022	LifeStyle Leaveacomment
ခဈြသူ၊ ရညျးစားတှေ ပထမဦးဆုံးအကွိမျအဖွဈ အပွငျမှာ ခြိနျးတှတေ့ယျဆိုတာဟာ ထငျသလောကျ လှယျကူတဲ့ကိစ်စတော့ မဟုတျပါဘူး။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ပွောရမယျဆိုရငျ အလုပျအကိုငျအငျတာဗြူးလိုပဲ စိတျလှုပျရှားဖို့ကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး သိပွီးသားမေးခှနျးတှကေို ထပျတလဲလဲမေးနမေယျ့အစား အခွားအကွောငျးအရာတှကေို ပွောခွငျးဖွငျ့လညျး တဈဦးနဲ့တဈဦး ပိုမိုခငျမငျမှုကို ရရှိနိုငျပါတယျ။
အရငျဦးဆုံး သငျနဲ့ခြိနျးတှတေဲ့သူကို သငျနဲ့ပကျသကျပွီး သိခငျြတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို အရဲစှနျ့ပွီး အရငျဆုံးမေးလိုကျပါ။ သို့ပမေယျ့လညျး ဘာသာရေး၊ နိုငျငံရေးနဲ့ ရညျစားဟောငျးတှအေကွောငျးကိုတော့ လုံးဝမမေးမိစဖေို့ အရေးကွီးပါတယျ။ တကယျလို့ တဈဖကျလူက သိခငျြတဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးလာတဲ့အခါမြိုးမှာလညျး သငျ့အနနေဲ့ စဉျးစားတှဝေမေနဘေဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ မှနျမှနျကနျကနျဖွပေေးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ သို့မှသာလညျး တဈဦးနဲ့တဈဦး အဆငျပွပွေလေေးနဲ့ အခကျအခဲမရှိဘဲ ပထမဦးဆုံးခြိနျးတှတေဲ့နလေ့ေးကို အကောငျးဆုံးဖွဈစမှောပါ။
တကယျလို့ မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ အရငျတုနျးက အရကျအလှနျအကြှံသောကျသုံးသူတှေ၊ ဆေးသုံးစှဲသူတှနေဲ့ ခဈြကွိုကျဖူးတယျဆိုရငျတော့ အရငျတုနျးက ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ ကိစ်စရပျတှကေို ပွောပွပွီး သငျနဲ့ အခုလကျရှိ ခြိနျးတှနေ့သေူက အရကျအလှနျအကြှံ သောကျသုံးခွငျး ရှိ၊ မရှိ၊ ဆေးသုံးစှဲခွငျး ရှိ၊ မရှိတို့ကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး မေးမွနျးသငျ့ပါတယျ။ “ အခုလိုမြိုး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး မေးမွနျးပွောဆိုခွငျးတှဟော တဈဦးနဲ့တဈဦး ယုံကွညျမှုကို တညျဆောကျရာမှာ အကူအညီဖွဈစနေိုငျခွငျး၊ ပိုမိုရငျးနှီးကြှမျးဝငျမှုရှိခွငျးနဲ့ တဈဦးနဲ့တဈဦး အဆငျပွလေိုကျလြောညီထှမှေုရှိခွငျးတို့ကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ . . .” ဆိုပွီး စိတျရောဂါအထူးကုဆရာဝနျ ဒေါကျတာ ရှားမနျးက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ချိန်းတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ ? ? ?
ချစ်သူ၊ ရည်းစားတွေ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အပြင်မှာ ချိန်းတွေ့တယ်ဆိုတာဟာ ထင်သလောက် လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် အလုပ်အကိုင်အင်တာဗျူးလိုပဲ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သိပြီးသားမေးခွန်းတွေကို ထပ်တလဲလဲမေးနေမယ့်အစား အခြားအကြောင်းအရာတွေကို ပြောခြင်းဖြင့်လည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပိုမိုခင်မင်မှုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရင်ဦးဆုံး သင်နဲ့ချိန်းတွေ့တဲ့သူကို သင်နဲ့ပက်သက်ပြီး သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အရဲစွန့်ပြီး အရင်ဆုံးမေးလိုက်ပါ။ သို့ပေမယ့်လည်း ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ရည်စားဟောင်းတွေအကြောင်းကိုတော့ လုံးဝမမေးမိစေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်ဖက်လူက သိချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးလာတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း သင့်အနေနဲ့ စဉ်းစားတွေဝေမနေဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သို့မှသာလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အဆင်ပြေပြေလေးနဲ့ အခက်အခဲမရှိဘဲ ပထမဦးဆုံးချိန်းတွေ့တဲ့နေ့လေးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမှာပါ။
တကယ်လို့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အရင်တုန်းက အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသူတွေ၊ ဆေးသုံးစွဲသူတွေနဲ့ ချစ်ကြိုက်ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ အရင်တုန်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ပြောပြပြီး သင်နဲ့ အခုလက်ရှိ ချိန်းတွေ့နေသူက အရက်အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ဆေးသုံးစွဲခြင်း ရှိ၊ မရှိတို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ “ အခုလိုမျိုး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးမြန်းပြောဆိုခြင်းတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ရာမှာ အကူအညီဖြစ်စေနိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိခြင်းနဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အဆင်ပြေလိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် . . .” ဆိုပြီး စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ ရှားမန်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous ပရိုတငျးဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အပငျထှကျပစ်စညျးမြား။
Next ကိုယျ ခဈြခငျမွတျနိုးသူတှကေို ခဈြခငျမွတျနျိုးတဲ့အကွောငျး ဘယျလိုထုတျဖျောပွသမလဲ ? ? ?